Ebee ka m nwere ikele Red Bull Rampage? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Red ehi rampage ndụ iyi - esi lebara
Ebee ka m nwere ikele Red Bull Rampage?
Ị nwere ikelelee Red Bull Rampage2019 na-ebi ndụUhie RedTV.Ọkt 23 2019
Enwere Redbull Rampage 2020?
2020 Red Bull RampageEgburu 1
A kagbuola otu n'ime ihe ngosi ugwu igwe egwu kachasị mma afọ a, na-elekwasị anya na nloghachi 2021. Kemgbe afọ iri na itooluUhie Red Redachikọtala ndị egwuregwu freeride kasịnụ si gburugburu ụwa ka ha sonye n'otu egwuregwu.Sep 2 2020
Nke a, ndị na-ege m ntị, bụ Red Bull Hardline, otu n'ime agbụrụ kachasị elu n'ụwa. Usoro a nwere ihe niile site na nnukwu jumps na ngalaba gnarled. Aga m achọpụta etu ihe ndị a si buru ibu na etu ọsịsọ ị ga-akụrịrị nnukwute nnukwute ndị ahụ, yabụ soro nọmba m na Red Bull. (Hard Rock music) (upbeate piano music) - Holy, nsọ mackerel! Ihe a, enweghi m ike ikwu okwu, ọ na-agbapụ gị pụọ n'oké ọhịa, gbadaa na okporo ụzọ awara awara ebe m chere na ọsọ ahụ adịghị, ọ tụrụ m n'anya na nnukwu ihe ahụ bụ, ọ dị, ọ bụ .. .
Ahhh, ara ka onye ara ebe odi na teepu m? , Ebee ka ọ dị? Ọ dị mma, ebe dị ụtọ n'ebe ahụ, nke ahụ mara mma ebe ụmụ okorobịa ahụ ga-akwụsị. Na m ga-abịa ozugbo na-arụpụta. Chaị, ọ fọrọ nke nta ka teepu gwụrụ m. (chị ọchị) Nke a buru oke, enwere isi isi, yabụ ị ga-aga ọsọ ọsọ iji mechie oghere ahụ. (obi ụtọ piano music) Ọfọn a dobe bụ obere oru.
Ọ mara ezigbo mma, mana ọ bụ nwayọ nwayọ, ịmara na ọ bụghị nnukwu ọsọ ọsọ, mgbe ị na-aga ngwa ngwa, ị ga-agbada ma jiri ike gị niile na-ebugharị site na igwe kwụ otu ebe ma na-ebute ebe ị na-atụda elu dị elu dị ka nke a ala na ihe nile n’aga n’ahu gi. Ajụjụ bụ otú ibu a dobe? Ya mere aga m ewere ihe dị ukwuu wee tụba ha n'ebe ahụ, aka nri, yabụ n'ogo ebe ị na-apụ, nke ahụ bụ ụkwụ 11, nye ma ọ bụ were, ụkwụ 2 n'elu, yabụ ụkwụ 13 ruo ebe dị ụtọ na nke a Tụlee. Ọ bụ ezigbo nnukwu ọdịda, ụdị adịghị anya.
O nwere ike ịbụ na ị ga-aga njem ihe dị ka mita asatọ. (Ọyụ nke piano) Ọ dị mma, ọ bụghị dị ka nnukwu ka nke ahụ na-agbada n'ime nnukwu nzọụkwụ anyị lere anya, mana ihe niile dị oke mma na usoro a, ọ nweghị ihe pere mpe ebe a. Ya mere, m ga-anwa itinye nke ahụ n'ọnọdụ.
Nke a bụ nnukwu nzọụkwụ d n'ime nnukwu berm, gbadata nnukwu steepụ, m ga-akpọ Steve, ọ ga-enyere m aka, ọ ga-ejide njedebe nke teepu ahụ. Na na na, Steve, otu n'ime marshals na nke a. Aga m agbada ebe ahụ wee nweta nọmba. (Tape squeaks) Echere m na enwere ebe dị ụtọ. 45 ụkwụ! (egwu piano upbeate) Ọ dị mma, enwere mgbochi mgbochi dị egwu na njem ahụ.
Karịsịa nke a, ee, nke a bụ Nnukwu Nzọụkwụ. Enwere m nnukwu obi ụtọ ịhụ etu ị dị, ị nwere ike ị na-eche etu ị ga-esi mee ngwa ngwa ahụ, ọ dị mma, enwere m otu n'ime obere igwe ebe a nke na-egosi etu ị dị ọsọ, I nweta a siri ike ọsọ ndu na otú ngwa ngwa ha n'ezie ga-aga izute na. Ma mgbe ahụ, m ga-enwetara gị ụfọdụ ọnụọgụ, tinye ihe a n'ụzọ ziri ezi, ole ọle, ogologo ole? kedu ka ị si arị elu n'ihe mgbochi a.
Chei, 40, nke ahụ bụ nkezi. Echere m ime ya 40, 41, nke ahụ dị mma. Enwere nnukwu itefere 41, yabụ oge ochie - ka anyị mee nke a. (Ìgwè mmadụ chịa) Ohh, ka anyị gawa! Lee anya na, azụ, 40.
Nke ahụ bụ ọsọ iji were awụlikwa elu ahụ. Nke ahụ bụ ngwa ngwa, ọkachasị n’elu igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu, yabụ, etinyere m ya n’aka nri, tinye tọọtụ m na aga m tụọ ogologo ọwụwa a dum n’ihi na ọ buru ibu. Ya mere, ka anyị pụọ. (Mezie mkpọtụ) ụkwụ 45.
Mana kicker a na-apụ apụ dị ụkwụ iri na otu n'ala. Gbagoo, ma eleghị anya ụkwụ asatọ, nke ọma mgbe ahụ ị nwere nnukwu ọdụ ụgbọ elu ebe a. Yabụ n'ebe ahụ ị nwere mpempe ụkwụ ụkwụ ụkwụ 6, ihe nkedo ụkwụ ụkwụ 7 tupu ị rute ebe dị ụtọ, yabụ enwere ọtụtụ mmejọ - ọtụtụ ohere maka ndudue mgbe ịnweghị ọsọ mgbe ị nwere ike ịbịaru 38 mph You jiri nke a pad. (egwu obi ụtọ) Nke a bụ mbadamba ihe m masịrị ịkpọ Hollywood akụkụ nke Red Bull Hardline.
Ọ bụ nnukwu ọdịiche dị n'okporo ụzọ, mana m na-atụ ụjọ ịbịaru ọgwụgwụ. Lee ya anya! Na-aga na ọsọ zuru oke ma mgbe ahụ ị ga-enwe mgbada ebe ahụ ijide gị. Enwere m ikpere na-adịghị ike ebe a, ọ dị oke.
Ma m ga-agba mbọ ịlele nke ọma dị ka o kwere mee. Ya mere, ihe m ga - eme bụ itinye ya na nsọtụ. Ọ dị mma, m ga-agbakwunye ebe a wee hụ ya, Sayonara! (ọchị hysterical) Sayonara dude! Ọ dị mma, ziri ezi, ya mere, na ọkwa a enwere ụkwụ 20.
Naanị itinye ya n'ọnọdụ dịtụkwuo, yabụ dabere na nha m, ọ nwere ike ịgbakwunye ụkwụ 6 ọzọ nke mere na ọ bụ 26 ụkwụ site na elu ruo n'okporo ámá. Ma mgbe ahụ trajectory nke onye ọkwọ ụgbọ njem site na ikuku (teepu squeak) dị ka ha niile na-ọdịda banyere 3 ụkwụ ala. Echere m na ebe onye ọ bụla dara ebe ahụ dị ụtọ, ebe ahụ.
Ihe dị ka ụkwụ 55 site n'elu ebe ahụ, ruo ebe a, chaị! (egwu Piano dị elu) Nke ziri ezi, nke a bụ ihe mgbochi ikpeazụ na usoro a ma ọ bụ nnukwu ogologo ma sie ike ịwụ elu. Na-apụ na ahịhịa ahịhịa, ntakịrị site na camber ahụ, mana ị ga-ejide ọsọ ahụ iji kparịta ụka a dum. Ọ dị ọsọ ọsọ, yabụ site n'ebe dị ụtọ ruo ebe dị ụtọ, m ga-atụ ya ma nye gị ntakịrị nkọwa nke ihe ahụ, yabụ wepụ teepu ebe a. (Tape squeaks) Echere m na ebe ahụ dị ụtọ dị, mana ịwụ elu.
Dịkwa mma. Feetkwụ 50 - ụkwụ 52, echere m na ị chọghị ịkwụsị n’elu, yabụ ihe dịka 52 ụkwụ dị. Chaị! Ya mere, gaa n'ihu, Red Bull Hardline N'ezie na ọnụ ọgụgụ ole na ole tụbara na enwere m olileanya na enyerela m gị ntakịrị nghọta banyere etu ihe ndị a si buru ibu na otu ị ga-esi merie ihe mgbochi ndị ahụ n'ebe a na egwu a.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ edemede ọzọ, pịa ebe a maka igwe ngwụcha mmeri nke afọ gara aga, Burnacha, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ edemede ọzọ dị egwu, pịa ebe a maka Maazi Martyn Ashton na-atụgharị Whistler, ọ bụ onye nzuzu Video subsdenye aha ma nata otu isiokwu dị ka nke a kwa ụbọchị n'izu. Echefula ma ọ bụrụ na ị hụrụ isiokwu a n'anya, nye ya mkpịsị aka aka ya.
Red Bull Rampage dị adị n'ezie?
Premiya nnukwu ugwu freeride omume na egwuregwu,Uhie Red Red, dị njikere ịlaghachi na 2021. Ihe mmegheUhie Red Redemere na 2001, kemgbe ahụ, ihe omume 14 dị iche iche na ndị mmeri 9 dị iche iche etinyela ọnọdụ ha n'akwụkwọ akwụkwọ akụkọ.
Ogologo oge ole ka Red Bull Rampage?
Ohaneze enwere ụbọchị atọ naanị igwu alaMgbapuna agbakwunye ụbọchị anọ iji banye igwe kwụ otu ebe iji nwalee ahịrị na ịwụ elu. Na ụbọchị anọ ndị nke a, ha nwere ike ịga n'ihu igwu ma degharịa ahịrị.Ọkt 24 2020
Ndi Netflix nwere ihe ojoo?
Mgbapu| Gụgharia Ugbu a |Netflix.Ọkt 19 2020
A ga-enwe Red Bull Rampage 2021?
Sonyere anyị na 10/25 /2021
Ikpe ikpe site na ndị asọmpi mbụ, ndị egwuregwu asọmpi iri abụọ na otu achọtala mpaghara mmemme ọhụụ ọhụụ nwere ọtụtụ ụzọ dị egwu karịa afọ ndị na - adịbeghị anya - weghachite mbipụta nke iri na anọMgbapuna mgbọrọgwụ nke nnukwu ugwu na-agba ịnyịnya, raw na untamed.Ọdị kilomita anọ na ebe a na-azọ asọmpi na mbara ọzara.
Onwere onye nwụrụ na Redbull Rampage?
Jordie Lunn nke Canada na-asọmpi n'oge ngwụcha naUhie Red Red, asọmpi akwụkwọ ịkpọ òkù na naanị ihe dị mkpa na-eme njem igwe kwụ otu ebe na ụwa na October 26, 2018, na Virgin, Utah. LunnnwụrụWednesday na okuku na Cabo San Lucas, Mexico.Ọkt 11 2019
Ebee ka Red Bull Rampage 2021 dị?
Sonyere anyị na 10/25/2021
Unzọ pụrụ iche na-achọ ebeNwa agbọghọ, Utah, na-akpọkwa ndị na-agba ịnyịnya ígwè ugwu kachasị mma n'ọzara ka ha nwee ike ịsọpụrụ maka otuto n'otu n'ime ule kachasị na nka na afọ.
A Kagbuola Red Rams Rampage?
Taa,Uhie Redna ọkwa ọkwa naakagbuonke 2020Uhie Red Red, asọmpi freeride mbụ nke ụwa, n'ihi ihe ịma aka na-aga n'ihu nke Covid-19. Ugbu a, anyị ga-atụsi anya ike nkọwa nke mbipụta 2021, mgbe Virgin, Utah ga-atụ anya ọzọ bụrụ etiti nke igwe kwụ otu ebe.02.09.2020
Kedu ebe ikpo okwu na-aga?
LeleeMgbapu| Prime Video.
Ndi rampage na Netflix Canada?
Ee,Mgbapudị ugbu aCanada Netflix. Ọ bịarutere maka ntanetị n'ịntanetị na May 10, 2020.